Ubushushu Pump Meat Dryer Machine
dehydrator Food chips apile
Imifuno emzimbeni Machines
Energy Imifuno Solar emzimbeni Machines
Commercial iziqhamo nemifuno Dehydrator Machine
namandongomane yezolimo dryer
namandongomane machine yokomisa umenzi
namandongomane Agricultrual machine yokomisa
Dryer nenkqubo recovery amanzi uyilo ekhethekileyo ukugcina umbala zendalo ngenxa womisa products.At xesha, ukuqinisekisa umgangatho imveliso ukuba uvavanyo lab edlulileyo kunye nenkqubo recovery ngamanzi eluhlaza-ukutya standard.The kuthabatha malunga oli-40% ngaphezulu okanye ngaphantsi kubalulekile.
1.Equipment umthamo iyunithi yokusebenza ngamnye 600-700kg zeentyatyambo.
2.The ixesha lokuqhubeka yesixhobo ngasinye elawulwa phakathi 18hours.
3.The lobushushu omiswe of isixhobo kufuneka zilungiswe bhetyebhetye phakathi 30degrees kunye 65degrees, yaye iqondo lobushushu kufuneka ngokuchanekileyo ilawulwe.
4.The inkqubo yonke air ejikeleza eshushu izixhobo kufuneka zenzelwe ngokwenzululwazi ukuqinisekisa ukuba izinto yokomisa iyunifomu kwaye akukho engile ofileyo.
5.The igesi hot eveliswe izixhobo ngexesha lenkqubo processing kunye omisa kunye namacandelo asebenzayo kufuneka incitshisiwe kwindawo ngexesha qhagamshelana manner.Direct kunye engamanzi nokucutheka (ulwelo iseli) ifuna ukusetyenziswa steel 304stainless (kubandakanywa itreyi ukululama, umbhobho zokuphambukisa, amatanki okugcina, njl.) ukuqinisekisa ukuba nolwelo yinto enye akangeniswanga ingcolisekile.
6.The apholisayo lobushushu amanzi esasaza amanzi okupholisa asetyenziswe ekondensa ungaphantsi 15degrees, lo ukufuma ze gesi umanzi nghena ekondensa imalunga 50degrees kwaye ukufuma ingaphezulu kwe-70% .I ukufuma ze gesi emva amafu efunekayo ukuze ube bancipha malunga-40% .Lo umthombo ongavelisa amanzi ratio kweentyantyambo ezintsha imalunga-40%.
Dryer nenkqubo recovery amanzi ingasetyenziswa iintyatyambo ezomileyo, imifuno ezizodwa imifuno.
(1) Iintyatyambo: ezifana rose, ifildi, lavender, Jasmine, njl.
(2) imifuno ezizodwa: ezinjalo njengoko imini njengenyibiba, iinyibiba amagqabi, zetyeleba amagqabi, njl.
(3) Herbs: Cocos poria, caulis dendrobi, ginseng, njl.
Rose omiswe e Bulgaria
Ifildi omiswe e Guizhou
Previous: Umphunga-Yenza CPC Solar nobushushu Pump Machine
Next: Air yomile iziqhamo okusula kunye nemifuno / chips banana machine isomisi
into lobushushu eliphezulu dehumidity ezihlangeneyo nempompo ubushushu machine eyomileyo
Power udidi lwemvelaphi 380V / 3N- / 50HZ
isiguquli amandla input 12HP
brand kwintlambo ivili evela America
uhlobo Kuvaliwe umsinga isiguquli
Evaporator aluminiyam esibamba ngefoyile ye sleeve
ekondensa aluminiyam esibamba ngefoyile ye sleeve
ubushushu ikaliwe Township 36
current ikaliwe A 18
lobushushu eliphezulu / lobushushu ulinganisele ℃ 85/80
umthamo ukugcwaliswa refrigerant IKG 4.5 * 2
isimo lobushushu Ambient ℃ -60
Size Ubushushu impompo host (mm) 2500 * 1400 * 1500
Ubushushu impompo vice umatshini (mm) /
equipment ubunzima IKG 500
Emsindweni DB (A) 55
lobushushu eliphezulu qeda ℃ 115
koxinzelelo kwicala qeda MPA ≦ 2.35
Yezihlunu flow fan Power (Township) 0.75 * 1 / 1.1 * 1
Ukucaciswa 380V / 3N- / F500
kwinqanaba manzi I
Chwetheza yokuvikela electric IP * 4
Ubungakanani sobhedu joint /
ezongezwayo Standard Umyalelo / ikhadi iwaranti / isiqinisekiso
1.Providing lobushushu eliphezulu iimveliso pump ubushushu evezwe ngu impahla ezibalaseleyo kwithekhinoloji ehamba kuphela.
2.Building epheleleyo inkqubo yobugcisa axhasayo ngoqeqesho lobuchule kunye nenkonzo thethwano.
3.Supporting utyelelo ukubuya rhoqo kunye nesicwangciso yesondlo.
4.Providing inkonzo umntu umkhondo ngokukodwa-wabelwa ukuba ukuqinisekisa unxibelelwano oluhle kunye nolungelelaniso kunye nabathengi.
5.Committing ekunikezeleni kunyaka-1 isiqinisekiso imveliso simahla yaye engqinelanayo abaza kuzisebenzisa.
6.Gradually ukuphanda & ukuphuhlisa nokuphucula iimveliso, ubuchwepheshe kunye nesisombululo.
Dryfree uba obalungiselwa ekunikezeni inkonzo yethu. We sikunikeze uyingxenye spare iiyure eziyi-24 ngosuku ukuze lulama imveliso ngokukhawuleza ngexesha kunye izifakelelo ngexesha ezinikwa yi kuthi. Sinako akhulule izifakelelo ngokuqhelekileyo wasebenzisa yempahla yethu e Dongguan kwi day.And yangoku nathi buza arhente zethu kunye namaqabane kwingingqi ezahlukileyo uncedo emva kwentengiso service.We ukuba kakuhle abanamava kwiprojekthi emva-intengiso yolawulo inkonzo edunyiswa ngabaxumi.
Enhle, ngexesha kunye nenkonzo ojongene noku, emva-yokuthengisa ngomnye iindlela uxabiso i Dryfree uphawu ngayo.
Dryfree uya kukunika inkonzo ebalaseleyo emva-intengiso, kungakhathaliseki ukuba imfuno sentengiso kutshintshwe. Wakuba unempahla Dryfree kaThixo, iinjineli zethu inkonzo emva-intengiso iya kubonelela gqolo uxabiso isiqinisekiso ngenxa uzaliso-mali lwakho.
Rose Dry Machine , Rose Dryer , Rose Izixhobo Water sokuBuyisa iXesha ekuPhulukenwe nalo , Bay Igqabi Ukuqwayita Machine , Rose emzimbeni sesitovu , ifildi Dryer Machine ,